Belarus oo u dhalatay Belarusian - 1aviagem.com
Belarus muwaadin u dhashay Belarus
Qormadii hore: Wareysiga: Sidee Canada tahay? by kansar
Post Next: Wareysi lala yeeshay Hangari - Talooyin ku saabsan Hungary, Australia iyo Brazil.
Dhejiyay 3 November ee 2018 by Rômulo Lucena
Waad salaaman tihiin, marka maanta waxaan wax yar ka hadlaynaa Belarus. Si tan loo sameeyo, waxba kama fiicna wareysiga muwaadin reer Belarusiya ah. Waxayna ahayd tan iyada oo maanka lagu hayo in aan wareysigan la yeeshay saaxiibkayga qaaliga ah ee Kate. Waxaan kulanay markii aan safarkii ugu horeeyay halkaa ku tagay. Waxaan booqanayay Minsk waxayna iyadu ahayd hagaha deegaanka ee dalxiis waxayna runtii naga caawisay wax badan inaan ku soo wareegno magaalada, qaadashada basaska saxda ah iyo inaan ku boodno joogsiyada saxda ah, na tusto meelaha qaar, iyo xitaa ka jawaabida su'aalaha ku saabsan waxyaabo kala duwan ee Belarus. Waxaan halkaa ka bilownay saaxiibtinimadeenii, taas oo ilaa maanta sii socota. Waxay xitaa ii soo dirtay biin qurux badan, oo leh calanka Belarusiyaanka, oo ah kii ugu dambeeyay ee aruurinta, laakiin laga yaabee inuu yahay kan ugu da'da weyn, maadaama uu u badan yahay inuu ka weyn yahay 30 sano, laakiin dhawaan ayaa lagu daray ururinta sidaas darteed waa ka weyn iyo ka yar isla waqti isku mid ah. Course Dabcan sidoo kale waxaan ku soo celiyey naxariistii anigoo hadiyad uga diraya halkan Brazil waana taas sida aan u ilaalineyno xafiiska boostada oo aan shaqo badan ku hayno. LOL (cod dheer ku qoslaya) 😂. Marka, ma bilaabi karnaa?
Sida caadada ah balooggan midabyada xariiqyada qoraalka waa la beddeli doonaa. Kate wuxuu noqon doonaa kan guduudan aniguna waxaan noqon doonaa kan cagaaran. Aynu bilowno.
a. Kate, halkaad ku dhalatay? Maxaad ku nooshahay maanta?
- Waxaan ku dhashay Mogilev (mid ka mid ah lixda gobol ee Belarus, 180 km u jirta caasimada - Minsk). Laakiin markaa waxaan u dhaqaaqay Minsk si aan wax uga barto jaamacadda luuqada federaalka ee Minsk, sidaa darteed waxaan u joogay halkaas inaan ka shaqeeyo (maadaama caasimada kaliya aad fursad u leedahay inaad kasbato lacag aad ku noolaato ...) hada waxaan guursaday wiil ka yimid Grodno (mid ka mid ah lixda ugu weyn) Magaalooyinka Belarus (Brest, Vitebsk, Gomel, Grodno, Mogilev iyo Minsk). Ninkayga sidoo kale waxaa laga soo raray magaaladiisii ​​isagoo loo wareejiyay caasimada si uu u soo barto ka dibna wuxuu u sii joogay Worwak Waxaan hadda ku noolahay guri ku yaal gobolka Minsk, oo 40 km u jira halkaas. Oo waxaan u maleynayaa inay tani tahay xulashada ugu fiican ee aan dooran karno!
Dhanka kale, baasaboor ahaan, anigu hadda ka dib ma ahan Kats ... laakiin waxaan ahay Kate. =)
b. Waa maxay shaqadaada hadda?
- Sidaad ogtahay, kahor intaanan keeninWaxaan aaday hay'ad socdaal oo ku taal waaxda soo dhaweynta waxaanan qaaday mas'uuliyadda shisheeyaha u yimid Minsk si ay u sahamiyaan magaaladan iyo guud ahaan Belarus. Halkaas ayaan ka shaqeynayay 4 sano haddana waxaan u shaqeeyaa shirkad Austrian ah, anigoo matalaya oo aanan baahi u qabin inaan xafiiska aado maalin kasta. Taasi waa $ 300 bishii. Waxaan ka shaqeyn karaa gurigeyga oo dalabkeyga adeegyada iyo iibinta ayaa ka sareeya, laakiin tani maahan sharci - waa mid ka reeban. Waxaan aad u nasiib badanahay inay shirkadani i heshay oo ay iga rabtay inaan u shaqeeyo waxyaabo isbeddelaya.
c-Maxaad ugu jeceshahay Belarus?
- Waan jeclahay Belarus maxaa yeelay waa waddan qurux badan oo nabdoon. Anaguna waxaan joognaa bartamaha Yurub, sida lagu sheegay dhammaan buugaagta ku saabsan Belarus waana run run - waxaa nagu hareeraysan Poland, Lithuania, Russia, Ukraine iyo tusaale ahaan - aniga - Vilnius (caasimada Lithuania) ayaa ka dhow magaaladeyda iyo waxaan tagnaa halkaas toddobaad kasta. Hadday shaqo tahay iyo haddii kaleba, taasina waxay iga dhigeysaa inaan dareemo inaan ka mid ahay Yurub. (Xaqiiqdii, ka dib dhammaan jeegagga xadka, taas oo aan xiiso badan lahayn).
d-Maxaad ka bedeli lahayd haddii aad awoodi kartid?
- Dalkan waa mamnuuc in laga jawaabo su'aalahan. (Haddii aad ogtahay waxa aan ula jeedo).
- Waa sidee siyaasadda? Waayo, Belarus waxay ka fiicnayd in ay ka madax bannaanaato Midowga Soofiyeeti? Sidee baa dimuqraadiyad?
- Marka, sida ku xusan dhammaan magacyada iyo taariikhda, waanu madax-bannaan nahay. Jamhuuriyadda Belarus ilaa 1994 (iyo tan iyo markaa waxaan leenahay hal madaxweyne oo kaliya), laakiin dhab ahaan waxaan xiriir adag la leenahay Ruushka, waxaan ku leenahay lacag aad u fara badan (xaqiiqdii, in annaga = madaxweynaheenna) iyo haa, waxaan nahay dal dimuqraadi ah illaa yaan la dhihin wax uusan jeclaan laheyn inuu maqlo madaxweynaheena… waxaan dhihi lahaa waa boqortooyo badan! 😜
Dhab ahaantii, dastuurku, waxaan leenahay xarun halka lagu sheegay in madaxweyne aan la dooran karin in ka badan waqti go'an. Laakiin madaxweynahayaga ayaa tirtiray khadkan oo wuxuu ahaa midka kaliya! Malaha tani waa jawaabo ku saabsan dimuqraadiyadeena.
- Haa ... Kama caban karo Brazil ...
f-Laakiin ma u malaynaysaa in madax-bannaanidu ay hagaajisay nolosha muwaadiniinta?
- Muwaadiniintu ma dareemayaan madax-bannaanidan, nasiib-darro, oo in yar oo ku nool caasimadda ayaa awood u leh inay aadaan meel kasta - si ay ugu noolaadaan wax yar oo ka wanaagsan. Laakiin, sida laga soo xigtay magaalooyinka kale, xaaladdu sidaa uma fiicna, dadku waa sabool, wax badan bay cabaan, weligood ma aadin waddan kale oo xitaa ma bixin karaan fiisaha ay ku tagayaan Lithuania, taas oo aad isugu dhow.
g- Luuqadda Belarus ma la mid tahay Ruushka? Ama yaa ogtahay sida loo hadlo afka Ruushku ma awoodi karo inay ku hadlaan luqadda Belarus?
- Waxaan leenahay laba luqadood oo qaran - Ruushka iyo Belarusiyaanka. Laakiin dad badan ayaa ku hadla Ruush, dad badan ma yaqaanaan Belarusian (sidoo kale ma aqaan, tusaale ahaan). 😆
Waxay ka dhigan tahay inaad fahmi karto reer Belarusiya, laakiin ma awoodid inaad si hufan ugu hadasho oo qalad la'aan. Waxay la mid tahay ruushka, laakiin waxay ku kala duwan yihiin ku dhawaaqida ereyada qaarkoodna gebi ahaanba way ka duwan yihiin. Iskuulka dhexdiisa dhammaan buugaagta waxaa lagu qoraa Ruush iyo Belarusian waxay la mid yihiin luqad labaad oo laga bilaabo sanadka afraad waxaan bilownaa inaan baranno luqadda Belarus iyo suugaanta. Xaqiiqdii, intaas ka dib dad badani ma dooran doonaan inay noqdaan luqadda ugu weyn, xitaa maxaa yeelay wax walba waxay ku bixi jireen af ​​Ruush ka hor Laakiin waxaan leenahay dugsiyo qaarkood oo leh luqadda Belarusiya oo dhameystiran - xitaa xisaabta ama fiisigiska ayaa lagu dhigtaa Belarusiyaanka. Laakiin tani way ka badan tahay marka laga reebo sharciga.
h- Maxaad ku talin lahayd dalxiis si aad u sameyso ama u booqato Belarus?
- Waxay kuxirantahay waqtiga uu isagu / iyadu haysto, iyo magaalada uu rabo inuu aado. Laakiin waxa ugu horreeya waa hubaal inaad timaadid Belarus oo aadan rumaysanaynin wax kasta oo shaqaalaha shirkadaha dalxiisku ay ku yiraahdaan ama waxaad ka hesho internetka, ama aad aqriso wararka maxalliga ah, maxaa yeelay runta kaliya ayaa noqon doonta tan aad adigu ku aragto adigu indhaha.
- Wow, waan jeclahay! (Runta kaliya ayaa noqon doonta mida aad indhahaaga ku aragto, kana timid Kate).
- Way fiicantahay in la yimaado waqti ka waqti si waqti loogu helo booqashooyinka kala duwan ee matxafyada, socod lagu soo maro magaalada oo laga yaabo inaad u safarto meel kale oo magaalada ka mid ah. Sidoo kale way fiicantahay haddii aad leedahay saaxiib ku tusi kara wax ama hage, xitaa iyadoo qaar ka mid ah tilmaamaha la qoray, isku mid maahan. Ha ka baqin Belarus - aad ayaan u nahay soo dhaweyn oo waxaan hadda haysannaa nidaam fiiso la'aan ah oo aan ku sugnaan karno illaa 30 maalmood (oo shaqeynaya oo keliya haddii aad timaaddo oo aad ka dhoofto garoonka diyaaradaha Minsk).
Ma jeclaan lahayd inaad wax kale ku darto? Fariin yar oo loogu talagalay qof kasta oo akhrinaya blogkan?
- Safar oo saaxiibbo ka sameyso waddan kasta oo aad tagtid! Waxaad is arki kartaa oo keliya hal jeer, laakiin xusuus wanaagsan ayaa had iyo jeer kula jiri doonta!
- gebi ahaanba waan oggolahay!
Hagaag, waxaan halkan nimid dhamaadka waraysi kale, iyadoo jidka ag fadhida, intaan dhammeyn waxaan rabay inaan kaga tago codsigeyga shaqsiyeed shirkada Kate, waad siin kartaa korsi! Ka sokow inay tahay hage weyn, wax badan ka ogaanshaha dalka iyo saaxiibtinimada badan, hadda waxay siisaa wareysiyo caalami ah !! Dhanka kale ee badda dhexdeeda, boggaga internetka ee dalka Baraasiil ee ku saabsan dalxiiska! Waxaan u maleynayaa inaan bilaabayo olole: #raiseKateSalary
😀 - Waxay ahayd farxad, farxad badan! Waad ku mahadsantahay wareysiga.
- Kate Farxad ayey ii ahayd inaan mar labaad kula soo hadlo, waxaan kuu rajaynayaa wanaag (adiga iyo saygaaga) safarkan cusubna waxaa laga yaabaa inuu ka buuxo farxad. Waan ku faraxsanahay waqtiga, daacadnimada iyo kaftanka wareysigan! Oo hadaad timaado Brasilia durba waad ogtahay, sax?
большое спасибо / вялікі дзякуй (caawimaad ka heleysa Google!)
Hadda waa adiga, haddaad rabto wareysigan, ku raaxeyso halkaa, la wadaag saaxiibadaa, raacna shabakadeena bulshada.
Safarro badan iyo nuxurka wareysiga, riix khariidadeena adduunka ee hoose. 😎
AFRIKA Aasiya YURUB WOQOOYIGAAmerica Oceania SOUTHAmerica
Iyo fiidiyowga ah marka aan helay Pin.
Wareysiga Amigos Belarus Belarusian magaalada Wareysiga Minsk política presente safarka ugu horeeya Xiisadaha safarka
Rômulo Lucena	Dhammaan Muuji →
La wadaag khibradaha safarka, soo qaado xoogaa dhaqameed iyo taariikh ah si aad safarkaaga uga dhigto mid nabad ah.
Safarka ugu horeeya ayaan sameyneynaa adigana waad nala imaan doontaa.
Ku biir 139 macaamiishu kale